Single na Dual ịgba nozulu - China ZhongPeng Special Ceramics
Anti-eyi Ne lining
RBSiC SiSiC efere
Burner nozzles na ire ọkụ nozzles
Silicon carbide nsogbu nozzles
Special SiC seramiiki akụkụ
Elu-ike mkpa-mgbidi na elu ike crucible f ...
Mmeghachi omume-bonded sịlịkọn carbide n'ekwú ọkụ efere
Burner nozulu na ire ọkụ separator
Single na Dual ịgba nozulu
Mmeghachi omume-bonded sịlịkọn carbide lining, Nka na ụzụ OA ...
RBSC Full cone Sprial nozulu
1.5 inch Ịgba desulfurization nozulu
RBSC (SiSiC) desulphurization nozzles bụ isi akụkụ nke flue gas desulphurization usoro ke thermal ike osisi na nnukwu boilers. Ha na n'ọtụtụ ebe, arụnyere na flue gas desulphurizaiton usoro nke ọtụtụ thermal ike osisi na nnukwu boilers.
Single direction nozulu
Na narị afọ nke 21 ọrụ ụwa n'obosara ga-amụba choro maka Cleaner, ihe oru oma arụmọrụ.
ZPC ụlọ ọrụ na-agba mbọ na-eme anyị akụkụ iji chebe gburugburu ebe obibi. ZPC specializes na ịgba nozulu imewe na nkà na ụzụ ọhụrụ maka mmetọ akara ụlọ ọrụ. Site elu ịgba nozulu arụmọrụ na ntụkwasị obi, ala na-egbu egbu umu anwuru n'ime anyị ikuku na mmiri ugbu a na-enweta. BETE n'ọkwá nozulu aghụghọ Njirimara belatara nozulu ịkwụnye, mma ịgba ụkpụrụ nkesa, lengthened nozulu ndụ, na ụba pụrụ ịdabere na arụmọrụ.
Nke a ukwuu oru oma nozulu na-arụpụta ihe kasị nta droplet n'obosara na nke kasị ala mgbali dapụtara belata ike a chọrọ maka pumping.
• The broadest akara nke gburugburu nozzles gụnyere mma clog na-eguzogide aghụghọ, wider akụkụ, na a zuru ezu nso nke aga.
• A na nso nke ọkọlọtọ nozulu aghụghọ: tangential uzo mmiri, ifufe bu agba gburugburu disk nozzles, na akwado nozzles, nakwa dị ka low- na elu-eruba ikuku atomizing nozzles maka imenyụ na akọrọ scrubbing ngwa.
• enweghị atụ ike chepụta, Nlụpụta na-anapụta ahaziri nozzles. Anyị na-arụ ọrụ na ị na-izute toughest ọchịchị ụkpụrụ. Anyị nwere ike izute gị pụrụ iche chọrọ, enyere gị aka iji nweta kacha usoro arụmọrụ.
Brief Description of FGD Scrubber Ikpehe
Ná nkebi a nke scrubber, na-ekpo ọkụ flue, haruru na-ebelata ke okpomọkụ tupu abanye tupu scrubber ma ọ bụ absorber. Nke a ga-echebe ọ bụla okpomọkụ mwute mmiri na absorber ma belata olu nke gas, si otú amụba obibi oge na absorber.
Nkebi nke a na-eji wepụ particulates, chlorides, ma ọ bụ ma si flue gas.
Nke a bụ na-ejikarị na-emeghe ịgba ụlọ elu na-eweta na scrubber slurry n'ime kọntaktị na flue gas, ikwe ka chemical Jeremaya mere na kee ndị NKE 2 na-ebe na sump.
Ụfọdụ ụlọ nche nwere a mbukota ngalaba. Ná nkebi a, ndị slurry na-agbasa na omume rụrụ ma ọ bụ ahaziri mbukota iji dịkwuo elu na kọntaktị na flue gas.
Ụfọdụ ụlọ nche nwere a perforated efere n'elu absorber ngalaba. Slurry na-edebe evenly na a efere, nke ma equalizes na gas eruba na-enye n'elu ebe na kọntaktị na gas.
All mmiri FGD systems n'ịwa a ụfọdụ pasent nke nnọọ ezi ụmụ irighiri mmiri na-rụrụ site ije nke flue gas n'ebe ulo-elu ụzọ ọpụpụ. The alụlụ eliminator bụ a usoro nke convoluted vanes na ọnyà na-ebikọta na ụmụ irighiri mmiri, ka ha-laghachiri usoro. Iji nọgide na-elu droplet mwepụ arụmọrụ, na alụlụ eliminator vanes ga-kpochara oge.
Oghere cone Tangential ifufe bu agba gburugburu nke Series
• Series nke nri n'akuku nozzles eji a tangential uzo mmiri na-emepụta na ifufe bu agba gburugburu
• clog na-eguzogide: nozzles enweghị esịtidem akụkụ
• ewu: onye-ibe mgbatị
• njikọ: flanged ma ọ bụ nwanyị, NPT ma ọ bụ BSP eri
ịgba e ji mara
• Kemgwucha ọbụna ịgba nkesa
• Ịgba ihe nakawa etu esi: oghere cone
• Ịgba akụkụ: 70 Celsius 120 Celsius
• Flow udu: 5 1500 gpm (15.3 na 2230 l / min)
Na pụrụ iche nha izute gị kpọmkwem nkọwa
Full cone gburugburu nozulu
• The mbụ gburugburu nozulu
• High-agbapụta n'ahụ ike ọsọ
• High ume arụmọrụ
• clog na-eguzogide: onye-ibe-ewu na-enweghị esịtidem akụkụ
• ewu: otu, abụọ ma ọ bụ atọ-ibe mgbatị
• njikọ: NPT ma ọ bụ BSP eri nwoke njikọ ọkọlọtọ, nne na eri na flanged njikọ dị site pụrụ iche iji
• Ịgba nlereanya: full na oghere cone
• Flow udu: 0,5 ka 3320 gpm (2.26 ka 10700 l / min) elu eruba udu dị
Ihe: Mmeghachi omume bonded Silicon Carbide (RBSC)
Nha: 0,75 inch, 1.2 nke anụ ọhịa ahụ, 1.5 anụ ọhịa, 2 inch, 2,5 inch, 3 inch, 3.5 anụ ọhịa, 4 inch, 4.5 nke anụ ọhịa na dị ka gị kpọmkwem chọrọ.
Previous: Silicon carbide nozulu, flanged
Osote: otu direction Desulphurizing nozulu
FGD Ịgba Scrubber nozulu
Full cone Ịgba nozzles
Full Jet Ịgba nozulu
oghere cone gburugburu Ịgba nozulu
oghere cone Ịgba nozzles
RBSiC gburugburu ịgba nozulu
Silicon Carbide Ịgba nozulu
Sillicon Carbide gburugburu ịgba nozulu
Solid cone Ịgba nozulu
gburugburu Full cone ịgba nozulu
gburugburu Full cone Ịgba nozzles
Ịgba Fan Water Jet nozulu
vortex Silicon Carbide ịgba nozulu
vortex Ịgba nozulu
Esịtidem threaded njikọ RBSC ịgba nozulu
DN40 vortex oghere cone sịlịkọn carbide nozulu
1.5 inch Ịgba nozulu
vortex oghere cone nozulu
sịlịkọn carbide desulfurization nozulu